Orinasa mpanamboatra China PG27DQI-165Hz | Seho tonga lafatra
Ity maodely ity dia manana ny fampisehoana eSports rehetra andrasana, izay mirehareha amin'ny fotoana valiny 1ms sy AMD FreeSync izay manafoana ny fangirifiriana sy ny triatra, fa ankehitriny kosa amin'ny HDR. Ny endri-javatra High Dynamic Range (HDR) vaovao dia manatsara ny lalao ataonao amin'ny loko mainty sy fotsy maro hafa hanehoana ny mazava sy ny antsipiriany mbola tsy hitanao talohan'izay. Aza adino intsony ny mpifanandrina aminao misitrika aloka indray. Supported Plug ary milalao ary tonga miaraka adaptatera anatiny ..
Mahazo ny ambony tanana amin'ny scenario amin'ny lalao miaraka amin'ny 165Hz ambony amin'ny andiany PG. Ny fakana tahan'ny haingam-pandeha haingam-pandeha ary manambatra azy miaraka amina endri-javatra feno premium dia miteraka fampisehoana eSports mifaninana amina vidiny tena mbola tsy nisy toa azy. Mampanantena traikefa malefaka-malama, ny andian-dahatsoratra PG dia hanome kilalao mahafinaritra toa ny fiainana ary ny tombony amin'ny fiantohana ny sary rehetra omena anao raha tsy misy doka. Mandehana miakatra mihoatra ny efa zatra ny masonao amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny framerates anao.
Ny jiro RGB mandeha ho azy dia mitondra fety ara-maso mahafinaritra, mifanentana amin'ny ankamaroan'ny takelaka takelaka misy loko. Afaka mampiasa projet Logo ny mpampiasa. Hamboarina ao anaty powrsupplywill hitondra anao birao madio
QHD dia manolotra in-4 ny hakitroky ny pixel an'ny HD, mamokatra antsipiriany mahavariana amin'ny antsipirihany, maranitra, ary koa mametaka toerana malalaka kokoa ahafahanao mankafy traikefa lehibe kokoa amin'ny lalao.
Fotoana famaliana 1ms haingam-pandeha
Malahelo tsy misy na inona na inona amin'ny fotoana famaliana 1ms, izay isan'ny millisecond fotsiny ny fehezan-dalàna mihetsika tsirairay. Mahazoa tombony ambony noho ny mpanohitra anao, mety amin'ny lalao FPS.
Fahalalahana amin'ny fitadiavana tabilao miaraka amin'i Freesync
Teknolojia AMD Radeon FreeSync namboarina namboarina hahatratra ny traikefa lalao milamina sy azo antoka indrindra amin'ny alàlan'ny fanesorana ny triatra, ny fikafika ary ny fitabatabana.
Teo aloha: JM27B-Q144Hz
Manaraka: 4K vy Series-UHDM433WE
Monitor amin'ny lalao 1ms
Monitor amin'ny lalao miolakolaka
Modely: YM320QE (G) -75Hz